SP-G38 120ml Yakagadzirwa nemaoko Girazi Ultrasonic Aroma Diffuser, China SP-G38 120ml Yakagadzirwa nemaoko Girazi Ultrasonic Aroma Diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Maindasitiri Limited
SP-G38 120ml Yakagadzirwa Neruoko Girazi Ultrasonic Aroma Diffuser
120ml Yakagadzirwa Nemaoko Girazi Ultrasonic Aroma Diffuser
1.7 Ruvara mwenje mwenje Mwenje Kuchinja: Yakakosha Oiri Dhivha Inotutira Kufungidzira Kwemwana Wako ne7 Inoshanduka Maitiro Emwenje, imwe neimwe yadzo inogadzikana pakati peBright uye Dim modhi, ruvara runogona kuiswa rwakadzikama pa. Chiedza chikuru chevana vanotya rima panguva yekurara. 7 mavara echiedza (Chena, pingi, orenji, yero, girini, bhuruu, pepuru) inogona kugadziridzwa pakati penzvimbo inotenderera nzira uye imwe-ruvara gadziriso modhi.
2.Diffuser / Humidifier / Chiedza chehusiku: Ingo donhedza mafuta ako aunofarira uye unakirwe nekunhuhwirira kwakanaka paunenge uchinyorovera mweya Zvakare inogona seyekunyaradza isina mafuta ekuwedzera mamwe mwando. Yechirume 7 kara LED mwenje inokonzeresa kufunga kwemwana wako. 7 mavara anotenderera ega kana akagadzika rimwe vara.
3.HIGH QUALITY MATERIALS: Iyo yekunze yakagadzirwa yakasarudzika uye yakakosha girazi Kana zvasvika kune yedu yekutanga yakakosha mafuta diffusers, isu tinoita poindi yekushandisa chero chinhu asi zvakafanana iyoyero-yakakwira giredhi, yakachengeteka, uye eco-hushamwari zvinhu, futi seyenyika-ye-iyo-iyo-ekugadzira michina maitiro uye akaomarara mhando kutonga.
4.PORTABLE: Diffusers eakakosha mairi anozvirumbidza ediki uye akaenzana saizi. Pasina kutora nzvimbo yakawanda, zvinowana nyore nzvimbo patafura sekambani panguva yekurara / kushanda / kuverenga /. Dhizaini inotakurika inoita iyi mini humidifier inogona kurongedzwa nyore nyore mumutoro wako kutanga rwendo runonhuwirira.
5.PERFECT CHIPO MAONO: Oiri diffuser inodzima yega kana mvura yapera. Iyi kunhuhwirira kwekuparadzira haizokanganisa kudzidza kwako, kushanda kana kurara. Inokodzera Imba, Yoga, yekurara, Hofisi, nezvimwewo Yakakwana chipo zano yemhuri uye shamwari dzinoda aromatherapy kana dzinogona kubatsirwa kubva Aromatherapy kuporesa.
goho DC12V, 1A
Nguva 4H / 8H / ON
Mistu Vhoriyamu 15-30ml / h
Nguva Yokupedzisira 4-8hours
Saizi yeyuniti Φ9.4 * 21.2cm
Unit uremu 700g
Ruvara rwebhokisi saizi 14.6 * 14.6 * 27.2cm
Ukuru hweCarton 44x44.5x55.7cm
NW / carton 11.5 Madzimabo
GW / katoni 12.5 Madzimabo
SP-G02 100ml yakakurumbira ceramic kunhuhwirira kwakashata
SP-G14M 100ml kuwanda kwakasarudzika wachi yemagetsi inogadzira aroma diffuser